Madaxweyne Farmaajo oo u safray dalka Suudaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo u safray dalka Suudaan
Madaxweyne Farmaajo oo u safray dalka Suudaan
October 4, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xaaskiisa markii uu ku socday Suudaan.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Arbaco u safray dalka Suudaan kadib markii uu casumaad rasmi ah ka helay Madaxweynaha Suudaan.
Qoraal uu boggiisa Faceebok soo dhigay ayuu ku yiri: “Waxaan kusii jeedqa dalka Suudaan, oo aniga iyo wafdigeyga, ay nooga bilaabayso booqasho rasmi ah oo labo cisho ah.”
Inta uu joogo dalka Suudaan, Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la yeelan doona dhiggiisa Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir si ay uga wadahadlaan xiriirka labada dal.
November 14, 2017 Tirinta codadka doorashada madaxtinimada Somaliland oo socota
President Farmajo travels to Sudan
Gollaha Wasiiradda Soomaaliya oo doortay xisaabiyaha guud ee qaranka
Miinada dhulka lagu aaso oo ugu yaraan todobo qof ku dishay duleedka Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan todobo qof ayaa ku dhimatay maanta oo Axad ah kadib markii miinada dhulka lagu aaso ay ku qaraxday, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Bumbada ayaa ku qaraxday gaari bas ah oo [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) 12-kii saac ee la soo dhaafay, roobab mahiigaan ah ayaa ka da’ay gobolada Puntland, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Roobka ayaa ka da’ay gobolada Bari, Gardafuu, Karkaar, Nugaal iyo qeybo kamid ah gobolka [...]